काठमाडौँ उपत्यका असुरक्षित, कोरोना संक्रमितको संख्या कसरी बढ्यो ? | Ratopati
बाहिरबाट आउने चापले गर्दा उपत्यका कोरोनाको जोखिममा : डा. पुन
personसुजन पन्त exploreकाठमाडौं access_timeअसार २३, २०७७ chat_bubble_outline0
काठमाडौं । सरकारले असार १ गतेबाट लकडाउनको मोडालिटी फेरेपछि पछिल्लो केही दिनयता काठमाडौँ उपत्यकाभित्र कोरोनाभाइरस संक्रमितको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । सोमबारमात्रै भक्तपुरका १०, काठमाडौंका २४ र ललिपुरका २० गरी उपत्यकाका ५४ जनामा संक्रमण पुष्टि भयो ।
मुख्तयः काठमाडौँ उपत्यकाको स्वास्थ्य संस्थाहरुमा कोरोनाको खतरा धेरै रहेको बास्तोलाले बताए । ‘खुकुलो लकडाउनको कारण एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा कोरोना सर्ने गरेको छ,’ बास्तोलाले भने ।
काठमाडौँ उपत्यकामा जनघनत्व बढी छ । त्यतिमात्र नभएर व्यापारी केन्द्र, मुख्य–मुख्य कार्यालयहरु पनि उपत्यकामा छ । बाहिरबाट आउने व्यक्तिलाई नाकामा रोक्न नसके काठमाडौँ उपत्यका डेन्जर जोनमा पर्छ । व्यापार विजनेसको कारण देखाउँदै काठमाडौँ आउन खोज्ने व्यक्तिहरुलाई नाकामै रोक्नुपर्छ । धेरै भन्दा धेरै नेपालीहरुलाई घुम्न पर्छ । मास्क पनि घाँटी मुनि लगाउँछन् । त्यसैले नियम अनिवार्य पालना गराउनुपर्छ । सामाजिक दूरी कायम गर्न नसक्नु मुख्य चुनौती हो । यसको बारेमा धेरै कुरा पत्ता लाग्न बाँकी नै छ । तर पनि प्रत्येक व्यक्ति सजक हुन आवश्यक छ ।
स्थानीय तहले पनि कोरोना संक्रमित ठाउँका मानिसहरुलाई अन्यत्र जान रोक लगाउनुपर्ने बास्तोलाको भनाइ छ । ‘उनीहरुलाई व्यवस्तिव क्वारेन्टिन बनाएर सहज वातावरणमा राख्नुपर्छ,’ बास्तोलाले बताए ।